Zvakavanzika zveBest Herb Grinder
A herb grinder dzimwe nguva inonzi fodya kana masora grinder anoshandiswa kucheka kana kucheka miriwo kana zvinonhuwira. Pane misiyano yakasiyana yemakwenzi grinder zvichienderana nehuwandu hwezvimedu zvarinazvo kana chinhu chazvinogadzirwa nacho kana mushini unoshandiswa kugaya mahebhu. Heano mamwe secr ...Verenga zvimwe »
Nguva yekutumira: Aug-13-2020
CHII CHINANGWA? Girazi chishandiso chakagadzirwa kukuya miriwo nezvinonhuwira muzvikamu zvidiki. Inogona kushandiswa pakukuya machira ekicheni, asi inonyanya kushandiswa kukuya mbanje mabhule muzvikamu zvidiki zvakaenzana. Iyo yakajairika grinder ine maviri hafu ayo anogona kupatsanurwa uye ave nemazino akapinza ...Verenga zvimwe »
LED chirimwa mwenje tekinoroji inotsanangudza ruzivo uye theoretical application
Parizvino, mhando dzemarambi emuchadenga mumusika anogona kuve akapatsanurwa muzvizvarwa zvitatu: Chiedza chekutanga chibereko che LED chine huwandu hwakagadziriswa wetsvuku uye bhuruu, ine mwenje wenguva dzose kusimba, uye DC magetsi. Iyo yechipiri-chizvarwa chinogara chiripo ikozvino chirimwa chirimwa chine ratidziro rat ...Verenga zvimwe »